Hayyamni dhaabbata Midrook Gold yeroof uggurame - NuuralHudaa
Hayyamni dhaabbata Midrook Gold yeroof uggurame
Dhaabbatni Midrook Gold waggaa 20f iddoo albuuda Laga Dambii dhuufanchuun Albuuda warqii fi kanneen biree kan oomishaa ture yoo tahu, yeroo kana hunda ummata naannicha jiraatu irratti miidhaa guddaa gahaa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa wagga darbe keessa hayyamni kun akka hin haaromfamne dhoorkee kan ture tahus mootummaa Federaalaa dhiheenya kana hayyamni kampanii kanaa waggaa 10niif haaroomsuu isaa hordofuun ummanni naannichaa mormii godhaa jira.
Guyyaa hardhaa ummanni naannichaa poolii elektriikaa gara kaampaanii kanaa deemu kuffisuun akka ifaa hin arganne godhee jira.
Ministeerri Albuuda, Boba’aa fi Gaazii Uumamaa Warshaa Warqee Miidrook Laga Dambii hardha irraa kaasee yeroodhaaf dhaabbachuu isaa beeksise jechuun FBCn gabaase. Ministeerichatti daayrektarri dhimmoota koominikeeshinii obbo Baacaa Faajjii
“komii ummanni faalama naannoorraa ka’ee kaasaa ture xiyyeeffannaa keessa galchuun amma qorannaan gaggeeffamee ibsamutti dhaabbaticha ittisuun tarkaanfii sirriidha,ittifamuun eeyyamichaa gaaffii ummataatif deebiidha” jechuu isaa FBC’n gabaaseera.
Next	Mormiin Godina Gujii keessaatti geggeeffamu ammas itti fufee jira. »
Previous « Markazni ummu Salaamaa fi Abuubakri barattoota isaa Eebbisiise
Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…
Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…
Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…
Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…
Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…